Manchester United oo diiwaan galisay dakhli taariikhi ah - BBC Somali
Manchester United oo diiwaan galisay dakhli taariikhi ah
Image caption Paul Pogba ayay Manchester United soo sixiixatay xagaagan
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa diiwaan galisay dakhli taariikhi ah oo gaaraya 515.3 milyan oo Gini sanadkan 2016, waana kooxdii koobaad ee Ingiriis ah ee sidaa samaysa.
Kooxdan ku dheesha garoonka Old Trafford Sanadkan markii ay qaadeen koobka FA-ga waxaa kale oo ay saxiixeen 14 heshiis oo maalgalin ay ku helayaan, waxaa sidoo kale kordhay dakhliga ka soo gala TV-ga iyo tigidhacada ciyaaraha.
Manchester United waxay hadda saadaalinaysaa in dhakhliga sanadka 2017 uu gaaro 540 milyan oo Gini inkastoo aysan ka dheelaynin koobka Horyaalka Yurub ee Champions League.
Iyada oo uu hogaaminayo macallin kooda cusub ee Jose Mourinho-na waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad.
Xisaabinta dakhligaas kor ku xusan wuxuu ku eg yahay ilaa sodonkii bishii lixaad ee sanadkan taas oo xaqiijinaysa in ay tahay kooxdii u horaysay ee Britain ka dhisan ee soo xaraysa dakhli gaaraya 515.3 milyan oo Gini, laakiin kaasi waxa uu ka hooseeya midka ay soo xaraysay Barcelona oo gaaraya 570 milyan oo Gini isla xiligaas oo kale.